Banyere Anyị - Hebei Jieyuanda Technology Co., Ltd.
Dị ka ọkachamara wuru ahịhịa emeputa ke China, Hebei jieyuanda Technology Co., Ltd emi odude ke Renqiu Economic Development Mpaghara, Renqiu City, Hebei Province ， Na mfe ịnweta Beijing-tianjin Expressway (G4), Ya arụ a nnọọ adaba okporo ụzọ ọnọdụ.
Jieyuanda Grass na-elekwasị anya na mmepụta na ahịa nke ahịhịa wuru maka ihe karịrị afọ 6. Iji ka mma ijere ndị ahịa anyị ozi ma melite ụlọ ọrụ ahụ, JIEYUANDA Grass E guzobere na Septemba, 2015. Ka ọ dị ugbu a, etinye ego CNY nde 30 iji gbasaa ụlọ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ịzụta igwe eji arụ ọrụ nke mbụ, dị ka eriri waya. igwe, tufting igwe, mkpuchi Machine kwa afọ mmepụta ikike esịmde 10 nde square mita.
Ngwa ọrụ niile nke JIEYUANDA ahịhịa adịghị egbu egbu na gburugburu ebe obibi, nke na-eme ka ahịhịa JIEYUANDAN dị mma maka mmadụ na anụ ụlọ. A na-eme nchọpụta nnwale na usoro ọkọlọtọ iji hụ na ngwaahịa ahịhịa nwere ntụkwasị obi. JIEYUANDA ngwaahịa ahịhịa ngwaahịa gafere ule nyocha nke National National Products Products Supervision na Nnyocha Center, SGS. JIEYUANDA nwekwaa asambodo sistemu njikwa ogo ISO9001 yana asambodo sistemụ njikwa gburugburu ebe obibi nke ISO14001.
JIEYUANDA ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ike ịmepụta ọtụtụ ahịhịa wuruwuru, gụnyere ahịhịa egwuregwu, ahịhịa ala, dị ka ahịhịa golf na anụ ụlọ anụ ụlọ wdg. JIEYUANDA ahịhịa nwere ike ahaziri ka afọ ojuju gị: Tufting nlele 3/4 ”, 5/8”, 3/8 ”, 5/16”, 3/16 ”, 5/32” Na ikpo elu sitere na 7mm ruo 70mm na mpịakọta obosara ruo 4m. Anyị ahịhịa wuru nwere ihe onwunwe nke ezigbo mmiri permeability, na-eyi ndị na-eguzogide, mgbanwe, mgbochi ịka nká, ike ike ọdụdọ, anwụ ngwa ngwa.
N'ihi ịdị mma a pụrụ ịdabere na ya na ọnụ ala, A na-ere ngwaahịa JIEYUANDA ahịhịa na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ebe ụwa. Anyị nwere ndị ahịa na North America, Latin America, Australia, Middle East, Asia, European Union wdg ... ickingrapara na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke 'Rkpụrụ a pụrụ ịdabere na ya na ọrụ dị mma', JIEYUANDA ga-aga n'ihu na-enye ndị ahịa anyị ihe atụ zuru oke. na ezi uche price na-ekpo ọkụ ọrụ.